Aqoonyahan Waa kee? – The Warsan
Aqoonyahan Waa kee?
by warsan April 30, 2020 May 1, 2020 0341
Waxa jira ereyo aynnu adeegsanno oo ku dhammaada codka (yahan). Sida: aqoonyahan, feedhyahan, suugaanyahan iyo kuwo kale oo fara badan. Haddaba, bal maanta aynnu is-dul-taagno; ereyga aqoonyahan oo ninba si u qeexo!
Beryahan dambe waxa jira erayo ay ummaddu aayar iska tidhaahdo oo afka baarkiisa saaran! Waxana erayada qeexidda u baahan ee la iska caadeystey ka mid ah: aqoonyahan, siyaasi iyo kuwo la mid ah.
Haddaba, haddii aynnu is weydiinno; aqoonyahanow kumaad tahay? Waxa laga yaabaa in aanay jawaabtu u fududayn sida dadka qaarkood u haystaan! Waayo, figradaha laga kala haysto macnaynta ereygan ayaa kala duduwan oo qof waliba sibuu u haystaa?!
Dadka qaarkood ayaa aqoonyahanka u haysta, qof iskuul galay oo shahaadad haysta – xataa dugsi hoosana ha ka baxee! Waayo, reerka halka hal inan ama dhawr wiil dugsiga dhexe uga baxeen 1950-1970 naadkii; aqoonyahankoodu wuxu ahaa/ ahaayeen intaa iskuulka uga baxday! Waana looga garaabi karaa marka loo eego intan iskuulka u gashay marka la barbardhigo, intooda kale ee aan waxba dhigan!
Dadka qaar kale ayaa ku dooda, in aqoonyahanku yahay qof digirii (degree) qaatay oo jaamacad ka qallinjabiyey – wuxuu doonaba ha bartee! Markaasi, dadka qeexitaankaasi aaminsan; waxa doodooda u sal ah; in uu ruuxu haysto shahaadad jaamicadeed – xataa ayaanu ku shaqayn wixii soo bartaye! Markaa iyaga, waayo’aragnimadu aqoonta uguma jirto.
Dar kalaa ku saleeya aqoonyahannimada, inuu qofku galay waxbarasho rasmi ah (formal education). Qolada sidan ku doodaa, ma aaminsana in culimada diintu yihiin aqoonyahanno! Sababta ay ugu diidayaan aqoonyahannimadana waxa u sal ah: culimada diinta baratay- gaar ahaan kuwii hore- oo ay u arkaan; in aanay soo qaadan waxbarasho toos oo nidaamsan isla markaasina aanay culimadaasi haysan wax shahaadad ah oo muujinaysa heerkooda waxbarasho! Qolyaha sidaasi aaminsanna waxa horseed u ah, qolyihii beryihii hore dugsiyada ka baxay ee loo yaqaaney, Almadarta ama la odhan karo cilmaaniyiintii hore!!
Kuwo kale waxa iskaga qasmay labada erey ee aqoonyahan iyo indheergarad (intellectual)! Mana kala saari karaan macnaha labada erey oo aad u kala fog.
Haddii aynnu soo ururinno dooduhu way fara badan yihiin oo qoloba meel bay qabsatay ama dhinac bay ula kacday qeexidda aqoonyahanka.
Waxa haddaba isweydiin leh, ragga diinta shiilay ee aynnu aqoontooda ka dheregsannahay xaggee baynu dhignaa? Raggase suugaanyahannada ah ee la arkay sawirrada ay nolosha ka bixiyaan, halkee ayaynu dhigna! Tusaale ahaan u soo qaado qaar ka mid ah raggaasi, Sida: Cabdullaahi suldaan (Timacadde), Singub, Cabdi Iidaan …
Maxaynnuse ka yeellaa, kuwa digiriiyada waaweyn sita ee doolar (American dollar) iyo darajo mooyaan aan wax kaleeto danaynin! Isla markaasina aan dalka ku soo kordhin, waxan muran ahayn! Kuwaasi qaarkood xataa ma yaqaanaan sida loo weysaysto! Marka ay wax cunayaanna, bidixda iyo midigtu waa iskugu mid!
Bal haddaba, adiguba qeexoo, waa kuma aqoonyahan? waa kuma indheergarad? Waa kuma indhowgarad?
Aniga aqoontaydii gaabnayd waxay i tidhi:
Ku arkhri jaanta labatiboodinta ee mooyaha ee Hiyee.
Aqoontii waxay i tidhi, Islaam baa lagugu dhalay
Aqoontii waxay i tidhi, Addoon baad tahay Illaah
Aqoontii waxay i tidhi, rasuulkaagii adeec
Aqoontii waxay i tidhi, asluub iyo edeb lahoow
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan uumiyuhu ku nicin
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan eex lagugu xaman
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan abtirsiin ku hodin
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan odaygii iibin
Aqoontii waxay i tidhi, sidii eeyga ha u daslayn
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan ubadkaa arradin
Aqoontii waxay i tidhi, ayay ooridaa bukoon
Aqoontii waxay i tidhi, iskuulada ubadka gee
Aqoontii waxay i tidhi, ninkaan Albaqraba aqoon
Aqoontii waxay i tidhi, ashahaado miyuu saxaa?
Aqoontii waxay i tidhi, Ushaa ceel lagu dayaa
Aqoontii waxay i tdhi, ilduufyo horaa jiree
Aqoontii waxay i tidhi, ayaan abriskii ku cunin
Aqoontii waxay i tidhi, ninkaan aabbihii ciseyn
aqoontii waxay i tidhi, adeerkii uma habrado
Aqoontii waxay i tidhi, ninkii iibshaa arlada
Aqoontii waxay i tidhi, aqoonyahan muu gayaa?
Halkaasi ka sii wad.
Cabdullaahi Maxamed Cumar
Saudi foreign reserves fall to their lowest since 2011
Sonko HHoards Deed of Transfer Documents From the National Treasury, Insists on Pulling Out
Oman’s sultan, Bahraini king to skip GCC summit amid hopes of breakthrough in Gulf crisis
warsan January 4, 2021 January 4, 2021
China controls Uighur minority through family separations, reports
warsan March 20, 2021
warsan September 20, 2020 September 20, 2020
Total Visits: 400,062
Total Visitors: 70,552